मुन्नी | Nagarik News - Nepal Republic Media
१२ फाल्गुन २०७४ १९ मिनेट पाठ
‘स्कुल हिँड्न हतार भइसक्यो । ल भात पस्किदेऊ,’ गुरुप्रसाद मास्टरसापले आफ्नी पत्नीलाई अह्राए ।
‘के हो यो, आलु मात्र ? केही हरियोपरियो छैन ?’ दाल र आलुको भुजिया मात्र देखेर मास्टरसापको रिसको पारो चढ्यो ।‘आज मुन्नी आइन त । धन्न अस्ति लिएको आलु अलिकति मात्रै बाँकी रहेछ।’
मुन्नी अर्थात् १७–१८ वर्षकी सब्जीवाली । कहिले बिहानै त कहिले अपराह्नतिर सागसब्जीको टोकरी बोकेर गाउँ घुम्छे । मुन्नी आइन भने गाउँमा धेरैको घरमा तरकारी पाक्दैन, जसरी आज गुरुप्रसाद मास्टर–सापको घरमा पाकेन । दाल र नुन–खुर्सानीसँग भात निल्नुपर्ने हुन्छ । बिहान र बेलुकी गाउँका मानिस मुन्नी कहिले आइपुग्छे भनेर घाँटी तन्काएर बाटो हेरिरहेका हुन्छन् ।नवयुवाको खेतीपातीतिर रुचि छैन । उनीहरू बरु युरोप, अमेरिका, खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरियालगायत देश हानिन्छन् । खेती गर्नेले पनि न समयमा बीउबिजन पाउँछन्, न मल नै।
गाउँ पस्ने बाटोको छेउमा पूर्वी तराईतिरबाट एक मेहनती किसान परिवार आएर बस्यो । पति रजाम र पत्नी आविदा, दुवैको उमेर ४० वरिपरि । उनीहरुका दुई सन्तान थिए– मुनिरा र रज्जाक । रज्जाक सानै थियो । । मुनिरा जसलाई बाबुआमाले मुन्नी भन्थे, जो किशोरावस्थाकी थिई, कान सुन्न र बोल्न सक्दिनथी ।
त्यो किसान परिवारले गाउँलेको केही बाँझो जमिन भाडामा लिएर तरकारीखेती गर्न थाल्यो । तरकारी खेती राम्रो भयो । उनीहरुले बाटोको छेउमा तरकारीको घुम्ती पसल पनि राखे । पसल पनि राम्रैसँग चल्थ्यो । त्यसमाथि रजाम र आविदाले पालैपालो टोकरीमा तरकारी बोकेर गाउँमा बेच्न लैजान्थे । उनीहरू जान नपाएका बेला मुन्नी तरकारी बेच्न जान्थी । गुरुप्रसाद मास्टरसाप, पण्डित नित्यानन्द, जगन्नाथ प्रधान–बा, प्रहरी चौकी सबै ठाउँमा उनीहरूको तरकारी पुग्थ्यो।
तरकारीको टोकरी टाउकोमा राखेर हिँड्न थालेको केही वर्षमै मुन्नी हलक्कै बढी । हेर्दाहेर्दै शरीरमा यौवनका उभार देखिन थाले । वक्षस्थल पुष्ट भएर चोली टिमिक्क कसियो । छिनेको कम्मर । कलाकारले मेहनत गरेर बनाएका मूर्तिका जस्ता नितम्ब । हेर्दाहेर्दै मुन्नी तरुनी भई । मुन्नीको शरीरमा यौवनको मादकता भरियो । खासमा मुन्नी काली छ । गोरो रङलाई सुन्दरताको मानक मान्ने हो भने मुन्नी राम्री होइन । कसैले जिस्काउँदा उसको गाला सिन्दुरपोतेजस्तो लाल हुन्थ्यो ।मुन्नी व्यापार पनि राम्रो गर्थी । बाबुआमा गाउँ घुम्दा टोकरीको आधाजसो पनि बिक्री हुँदैनथ्यो । तर, मुन्नी तरकारी बेच्न जाँदा टोकरी रिŒयाएरै फर्किन्थी । तरकारीको हारालुछजस्तै हुन्थ्यो । मुन्नी हिसाबमा पनि टाठी थिई । व्यापारमा बाठी पनि रहिछे भनेर बाबुआमा मक्ख पर्थे।
पण्डितको घरमा अहिले अरु नै कोही बस्छ । त्यहाँ पनि मुन्नी कहिलेकाहीँ पुग्छिन् । चिन्नेहरू कसैले टिठ गरेर केही खान दिन्छन् । नचिन्नेहरूले पागल आइमाई कहाँबाट आई भनेर लघार्छन् । अलि पर पुगेर बिचरी फेरि फर्किन्छन् । यो क्रम चलिरहन्छ । बस्, चलिरहन्छ ।
पहिले पण्डित नित्यानन्द मुन्नीलाई छुँदैनथे । मुन्नीले तरकारी जोखिसकेपछि पोलिथिनको झोलामा राखेर अलक्क भुइँमा राखिदिन्थी र पण्डितले पनि पैसा भुइँमै राखिदिन्थे । मान्छे छुन नहुने तर त्यही मान्छेले उत्पादन गरेको तरकारीचाहिँ खान हुने उनको धार्मिक आडम्बर बुझिनसक्नुको थियो । तर, उनको धर्मको खोल उत्रँदै गयो । उनी मुन्नीको हात छुन लालायित हुन थाले । उनका आँखा टोकरीका काउली, बन्दातिर भन्दा मुन्नीका अवयवतिर बढी जान थाले । मुन्नीको गलाबाट चुनरी चिप्लिँदा खुला हुने वक्षस्थलको अन्तरालमा पण्डितको नजर छेड्लाजस्तो गरी गढ्न थाल्यो।
गुरुप्रसाद मास्टरसाप पनि अहिले तरकारीको मोलतोल गर्न आफैँ तम्सन थाले । जब बाहिर मुन्नी आएको चाल पाउँथे, उनी श्रीमतीलाई कुनै निहुँले भित्र पठाउँथे र आफू बाहिर निस्कन्थे । मुन्नीका मादक वक्षमा आँखा गाड्दै बन्दा र फर्सीलाई मुसार्थे । ट्युसन पढ्न आउने अल्लारे ठिटा पनि मास्टरसापको आँखा छलेर मुन्नीलाई खराब नियतले हेर्थे । मुन्नीप्रति चौकीका सिपाहीले पनि कुनियत दर्शाउँथे । असईसाप हुँदा भने कुनै सिपाही मुन्नीको नजिक ढिम्किनै पाउँदैनथ्यो । मुन्नीसँग जिस्किने, छिल्लिने, तरकारीको झोला समात्दा हातै समात्ने एकलौटी अधिकार मानौँ असईसापले मात्र पाएका थिए ।अरु त अरु नाति–नातिनी भइसकेका विधुर जगन्नाथको सुषुप्त भइसकेको पुरुषत्व पनि मुन्नीलाई देख्दा फेरि चलमलाउन थालेको थियो । पञ्चायतकालीन प्रधानपञ्च भएकाले सबैले उनलाई प्रधान–बा भन्थे, सबैले सम्मान गर्थे।
मुन्नी तरकारी लिएर आँगनमा छिर्नेबित्तिकै बूढा परेवालाई दाना खुवाउने बहानामा बाहिर निस्कन्थे र मुन्नीको सौन्दर्यको चक्षुपान गर्थे । ससुराको हर्कत देखेर बुहारीहरू लाजले घुम्टो ओढी घरभित्र पस्थे ।
अरू जवान अल्लारे ठिटाहरूको त कुरै नगरौँ । भमराहरू फूलवरिपरि मडारिएजस्तै मडारिन्थे । मुन्नीको घुम्ती पसलवरिपरि साइकल कुदाइरहन्थे । मुन्नीका बाबुआमालाई वास्ता थिएन, छोरीले जो व्यापार राम्रो गरिरहेकी थिई।
रजाम–आविदाको सबै कामधन्दा ठीकै चलिरहेको थियो । अकस्मात् मुन्नीको रजस्वला बन्द भयो । आमा आविदाले यसलाई सुरुमा सामान्य रूपमा लिइन् । आफ्नो रजस्वला अनियमित हुने, कहिले दुई–चार दिन छिटै हुने र कहिले दुई–चार दिन ढिला हुने भएकाले छोरीको पनि त्यस्तै भएको होला भन्ने सोचिन् ।
हप्ता हुँदै महिना बित्यो । मुन्नीको मासिक धर्म सुचारु भएन । बरु ऊ त मोटाउन थाली । गाला भुक्क भयो । कम्मर सोलोडोलो हुन थाल्यो । स्तनको आकार बढेर चोली फुट्लाजस्तो भयो । खानामा अरुचि हुन थाल्यो । पिसाब फेर्न पनि तारन्तार जान थाली । पहिलाजस्तो हाँस्ने, रमाउने गर्न छाडी । काम गर्दा पनि छिटै गल्न थाली । विवाह नभएकी छोरी गर्भवती भएको स्पष्ट लक्षण देखिन थाल्यो । आमा आविदा आत्तिन थालिन्।
बाबुआमाले मुन्नीलाई लिएर अस्पताल गए । अब भने गर्भ बसेको पक्का भयो । बाबु रजामले रिसको झोँकमा मुन्नीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटे । कसले यस्तो ग¥यो भनेर सोध्दा गाउँतिर देखाउँथी मुन्नी । बिचरा बोल्नै सक्दिनथी, कसको नाम लेओस् ?भोलिपल्ट रजाम र आविदाका लोग्ने–स्वास्नी गाउँतिर निस्किए । मास्टरसापको घरमा गएर रोकिए । उनका कुनै विद्यार्थीले इज्जत लुटेछन् कि भन्ने प¥यो । टयुसन पढ्न आउने सबै केटालाई जम्मा गरेर मास्टरसापले हकारे । केटाहरू सबैले अनभिज्ञता प्रकट गरे । त्यसपछि मेरा विद्यार्थीहरू त्यस्ता छैनन् भनेर मास्टरसापले उनीहरुलाई पठाए।
उनीहरु पण्डितका घरतिर गए । उनी तुलसीको मठमा पानी चढाउँदै थिए । ‘राम राम के सुन्नुप¥यो ? यस्ती लाटी बोल्न नसक्नेको इज्जत कसले लुट्यो होला ? त्यसको नर्कवास होस्,’ पण्डितले सहानुभूति प्रकट गरे ।रजाम र आविदा त्यसपछि प्रहरी चौकी गए । कुनै सिपाहीले पो मुन्नीलाई पेट बोकायो कि हजुर भनेर असईसँग हात जोडे । असईले उल्टै हप्कीदप्की गरे । प्रहरीलाई दोष लगाए थुनिदिने धम्की दिए । उनीहरू भयभीत भएर फर्किए।
त्यसपछि उनीहरू प्रधानबाको घर गए । प्रधानबाको रबैया पनि उस्तै थियो । ‘यो कहाँ–कहाँ जान्छे ? को–कोसँग लसपस गर्छे ? मैले के जानू ?’ उनको भनाइ थियो ।आशाको अन्तिम बिन्दु गाउँमा एउटा आमा–समूह थियो । आमा समूहले गाउँमा मदिरा नियन्त्रण गर्ने, झै–झगडा मिलाउने, सुलह गराउने काम गथ्र्याे । गाउँमा होहल्ला गर्नेहरू आमा समूहको नाम सुन्नेबित्तिकै थर्कमान हुन्थे । प्रहरीले पनि आमा समूहको काममा दखल गर्दैनथ्यो । मुन्नीका बाबुआमा आमा समूहकी अध्यक्ष दुर्गादेवीको घर पुगे ।दुर्गादेवीले अर्को हप्ता गाउँका सबै पुरुषलाई भेला हुन उर्दी जारी गरिन् । रजाम–आविदाले मुन्नीलाई लिएर आए । ठूलो भीड जम्मा भयो ।
‘ल मुन्नी, देखा, यिनीहरूमध्ये कसको गर्भ तेरो पेटमा छ ?’ दुर्गादेवीले मुन्नीलाई भनिन् ।
मुन्नीले भीडतिर हेरी । दोहोर्याइतेहर्यार्ई नजर घुमाई । त्यहाँ नभएको सङ्केत गर्दै मुन्टो हल्लाई ।
भीडमा प्रहरी चौकीका सबै सिपाही थिए । असईसाप थिएनन् । उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएका रहेछन् । कानुनका पालक, जनताका सुरक्षामा समर्पित प्रहरीका हाकिमलाई शंका गर्ने कुरै भएन । प्रधानबाका छोरा सबै थिए तर प्रधानबा थिएनन् । उनलाई हनहनी ज्वरो आएकाले ओछ्यान परेका रे ! त्यस्ता बुज्रुक, नातिनातिनी भइसकेका बूढा, सबैले मानेका व्यक्तित्वबाट त्यस्तो कुकर्म कसरी होला र ?
गुरुप्रसाद मास्टरसापसँग ट्युसन पढ्न आउने सबै केटा थिए तर मास्टरसाप भने थिएनन् । त्यही दिन शिक्षा कार्यालयमा जरुरी काम परेको भनेर सदरमुकाम गएका रे ! ज्ञानगुन बाँड्ने, चेतनाको ज्योति छर्ने र नैतिकता सिकाउने शिक्षकबाट त्यस्तो अनैतिक कार्य कसरी भयो होला र ?पण्डित नित्यानन्द एउटा जजमानको घरमा एकाह लगाउनुपर्ने भएकाले नआएका रे ! त्यस्ता बाल–ब्रह्मचारी, धर्मग्रन्थका ज्ञाता, पाप–धर्म के हो भन्ने राम्रो जानेका व्यक्तिबाट सीधै नर्क जाने काम भयो होला र ? नर्कमा भकभक उम्लिएको तातो तेलमा डुब्ने रहर यिनलाई होला र ?
आमा समूहले यी अनुपस्थित व्यक्तिबारे एकरति पनि शंका गरेन । रजाम र आविदा मुन्नीलाई लिएर निराश हुँदै फर्किए । बाटोमा मुन्नी पण्डितको घरअघि पुगेपछि टक्क अडिई । पण्डितको घरको ढोका बन्द थियो । बाहिरबाट ताल्चा मारेको थियो । मुन्नी मास्टरसापको घरअगाडि पनि रोकिई र आँगनमा के ओर्लिएकी थिई, मास्टर्नी कुचोले ठटाउँछु भनेर जाई लागिहालिन् । प्रधानबाको घरको गेट नै खुलेन । चौकीमा पनि मुन्नी अडिई । सिपाहीले गेटबाट भित्र छिर्नै दिएनन् । थकित अनि बदनामीले लज्जित उनीहरू आफ्नै कर्मलाई दोष दिँदै फर्किए।
त्यसको केही दिनपछि मुन्नीको परिवार एकाएक हरायो । उनीहरूको घुम्ती पसल खुलेन । झुपडीको ढोका ढप्किएको थियो । न त उनीहरूलाई कसैले तरकारीको टोकरी बोकेर हिँडेको देखे । कहाँ गए थाहा भएन । उनीहरूको बारीमा फलेका तरकारी त्यत्तिकै पाकेर कुहिन थाले । कोही गाउँलेले टिपे । केही गाईवस्तुले खाए । उनीहरूको कच्ची घरको भित्तामा भ्वाङ पर्न थाल्यो । आँगनमा लेउ पर्यो । पालीको छाना खस्यो । पछि त जमिनवालाले त्यो झुपडी पनि भत्काएर त्यहाँ एउटा पक्की घर ठड्याए । त्यसपछि मुन्नीको परिवारको अवशेष केही बसेन । गाउँलेले मुन्नीलाई बिर्सिए । रजामको परिवार कुनै समय त्यहाँ बस्थ्यो भन्ने कुरो उनीहरूको मानसपटलबाट विलीन भयो।समय बित्दै जाँदा त्यो गाउँ बिस्तारै एउटा बजारमा विकसित भयो । पहिला लडिया, साइकल चल्ने कच्ची सडक पिच भएर मोटरसाइकल र गाडी गुड्न थाले । सडक दायाँबायाँ सटर भएका पक्की घर खडा भए । पसल थपिँदै गए । बिजुली आयो । फोन र इन्टरनेट चल्यो।
पुराना थुप्रै मानिस बजारले विस्थापित भए । धेरै नयाँ मानिस आए । प्रधानबा परलोक भए । असईसापको सरुवा भइसकेको थियो । पण्डित देवघाटतिर गए । उतै आश्रममा बस्छन् रे ! मास्टरसाप पनि ‘रिटायर्ड’ भए । रोगले थलिएर ओछ्यान परेका छन्।बजारका रूपमा विकसित भएको त्यो गाउँमा अहिले एउटी पागल महिला देखिन्छिन् । जगल्टा परेको कपाल, फाटेको, मयलले कटकटिएको लुगाले बेरिएको अर्धनग्न शरीर लिएर उनी सडकमा ओहोरदोहोर गर्छिन् । उनीसँग हमेसा एउटा टोकरी हुन्छ।
टोकरीमा ढुंगा र टिनको बट्टा यस्तै के–के हुन्छन् । कहिले चौकीको अघि पुग्छे त कहिले प्रधानबाको घरको गेट खटखटाउँछिन् । मास्टरसापको घरको आँगनमा पनि घरीघरी पुग्छिन् । मास्टर्नी सदाझैँ कुचो लिएर जाइलाग्न छाड्दिनन् । पागल महिला आफ्नो टोकरी सम्हाल्दै भाग्छिन् ।पण्डितको घरमा अहिले अरु नै कोही बस्छ । त्यहाँ पनि उनी कहिलेकाहीँ पुग्छिन् । चिन्नेहरू कसैले टिठ गरेर केही खान पनि दिन्छन् । नचिन्नेहरूले पागल आइमाई कहाँबाट आई भनेर लघार्छन् । अलि पर पुगेर बिचरी फेरि फर्किन्छन् । यो क्रम चलिरहन्छ । बस्, चलिरहन्छ ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७४ ०८:०४ शनिबार